Home » Creative Writing » မိန်းမတယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု
ဟုတ်ဒယ် မမဂျီး…အဲလိုလုပ်ပြိုက်ရမှာ ….ယောကျာ်းနဲ့သားသမီး မျက်နှာ တကမ္ဘာ ထင်နေတဲ့ မိန်းမတွေ သိပ်သနားဖို့ကောင်းဒယ်…
ကျုပ်ကတော့.. အောက်ကအဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းတီဗီထဲကြည့်.. အဲဒီဝက်ဆိုက်ကြည့်ပြီး.. တွေးနေမိတယ်..။
ဖိုနဲ့မ သဘောကို နားလည်ပါတယ် သဂျီးရယ်…ဒါပေမဲ့ စောင့်ထိန်းသင့်တာလေးတွေ စောင့်ထိန်းစေချင်တာပါ…single ဆို ကြိုက်သလောက်ကဲပါစေ….
ဘုရားလက်ထက်က.. ဥတ္တရာဆိုတဲ့မိန်းမဟာ.. ဗုဒ္ဓဆီမှာတရားနာနိုင်ဖို့.. သူ့ယောက်ျားကို..သီရိမာဆိုတဲ့.. ပြည့်တန်ဆာတယောက်ငှားပြီး.. အတူတူထားပေးဖူးတယ်…။
အဲဒီသဘောနားလည်ရင်.. အိမ်ထောင်ရေးကြာရှည်တည်မယ်… ထင်..။
မြန်မာပြည်မယ်.. ခေတ်စားလာရင်.. ကောင်းမယ်ထင်..။
အင်း ဒဂလိုဆိုရင်ဖြင့် အဲမိန်းကလေးတွေ ကျောင်းပီးကြလို့ လင်ကောင်းသားကောင်းယူကြတဲ့အခါမှာ အဲယောကျာ်းက အော် ငါ့မ်ိန်းမ ကျောင်းပီးအောင် ဒီလိုကျော်ဖြတ်လာတာပါလားလို့ နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလား သဂျီးရဲ့…..ပီးတော့ အဲအူးအူးတွေရဲ့ မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေကလည်း ကုသိုလ်ရပါတယ် လို့ဆိုမလား မသိ….:k:
အဲဒါ.. ယူအက်စ်မှာ…တကယ်ဖြစ်နေတာပါခင်ဗျ…။ ကောလိပ်ကျောင်းသူ သန်းချီပြီး Sugar Baby လုပ်နေကြတာ…။
ကောလိပ်ပြီးလို့.. တက္ကသိုလ်ပြီးလို့.. ဘွဲ့တခုကိုင်ထားတဲ့.. အလုပ်ကောင်းလစာကောင်တဲ့မိန်းမကို.. ဘယ်တကောင့်သားက… “ငါ့မ်ိန်းမ ကျောင်းပီးအောင် ဒီလိုကျော်ဖြတ်လာတာပါလား” လို့ မေးရဲမယ်လို့..
လုပ်လို့ရှိရင်.. နောင်ဘ၀အတွက်လည်း… ရည်ရွယ်ကြ…
In 2013, Seeking Arrangement announced that approximately 44 percent of its 2.3 million “babies” are in college.
ဟုတ်ပါပီ သဂျီးရယ်….ယူအက်စ်မှာ တော့ sex case တွေက ရိုးနေပီကော…သို့ပေမဲ့ ဒါက ဗမာပြည်ကော….ဗမာအမြင်နဲ့ပဲ ရေးကြည့်တာပါ သဂျီးမင်းရယ်…:k:
ကိုယ်လဲ မသိ တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း မို့ ဒီတစ်ခါတော့ ဝင် မငြင်း တော့ပါဘူး။
ရေးပေါ့ အူးသူရ ရဲ့….အူးသူရ ရေးရင် ပိုကောင်းမှာ…ယောကျာ်းတွေ အကြောင်းသိရတာပေါ့…
ဘာမှမလုပ်နဲ့နွယ် ဒမာအုပဒေလာဘီ မူကျမ်းအဆင့်ကို ကျိရတာတော်တော်ကျက်သရေရှိတာလေ့
ကျုပ်တော့ တော်တော်သဘောကျဒယ် သောက်ကမျင်းကျောစွဲတဲ့သူခံကျေးဆိုတော့ကာ လူတိုင်နှစ်သက်ကြမယ်ထင့်
အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ၊ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းငြိပေါ့ အန်ကယ်ဂျီးရေ…..အခုခေတ်က ခင်သန်းနုထက် ဆိုးတဲ့ မ်ိန်းမတွေ ရှိတယ်လေ….
ချာတူး​ရေ အရာရာတိုင်းဟာ အဆိုးအ​ကောင်း နှစ်​ခုရှိမြဲမို့ အဲ့ ဥပ​ဒေ အတည်​ဖြစ်​ရင်​​တောင်​ တခြားတဖက်​က မလွယ်​​လောက်​ဘူးတဲ့။ ဥပ​ဒေအ​ကြောင်း ​နော​ကျေ​နေတဲ့ မမှီ ​ယောက်​ခမက ​ပြောပြတယ်​။ မမှီက မိန်းမ​တွေ အတွက်​ ​ကောင်းလိုက်​တာလို့ ဝမ်းသာအားရ​ပြောလို့​လေ။ ကိုယ်​က ဥပ​ဒေမှ နားမလည်​တာ။
အခု​ခေတ်​က ​ယောက်​ကျား​လေးကလည်း လင်​ရှိမိန်းမကို မ​ရှောင်​ မိန်းမကလည်း မယားရှိ​ယောက်​ကျားကို မ​ရှောင်​။ သူ​တော်​​ကောင်းတို့ တကယ်​ကို တရားပျက်​ပြီ ထင်​ပါရဲ့။
ဥပဒေ အကြောင်းတော့ သေချာနားမလည်ပါဘူး မမှီရယ်…ဒါပေမဲ့ ဒီဥပဒေ အတည်ဖြစ်သွားရင် လက်ထက်တာတွေ ထက် LT တွေ ပိုများခေတ်စားလာမလားပဲ….နိုင်ငံဂျားမှာလိုပေါ့ ကလေးတွေရမှ လက်ထပ်ကြတာတွေလေ…..အကောင်းနဲ့ အဆိုးကဒွန်တွဲနေမှာပါပဲ…လက်ထက်ပီးသားလူတွေအတွက်တော့ ဒီဥပဒေက ကောင်းမှာပါ…လက်မထက်ရသေးတဲ့ လူတွေကတော့ လက်ထက်ဖို့ ပိုစဉ်းစားလာကြမလားပဲနော်…..
LT လည်းမရဘူးတဲ့။ နှစ်​ဦးသ​ဘောတူလို့ ကြည့်​ဖြူရင်​​သော်​မှ ပတ်​ဝန်းကျင်​က တရားလို့လုပ်​ တိုင်​ကြားလို့ရပြန်​သမို့ အမှု ​မြောက်​ပြန်​သတဲ့။ LT ဖို့ စဉ်းစားထားရင်​လည်း မလွယ်​ဘူး။
အော်…ဟုတ်လား….ဒါဆို ပိုကောင်းမယ်ထင်တာပဲ….တလင်တမယားစနစ်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်ကောင်းမယ့် ဥပဒေလို့ထင်တာပဲ မမှီေ၇… မမှီ ​ယောက်​ခမပြောတဲ့ အခြားတဖက်ဆိုတာတော့ သိချင်သား…..
မာကတ္တာ က ဘာရီးဒုံး အူးလေး…
ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ တဖက်မှာ လုယက်မှုရှိတယ်.. တဖက်ခြမ်းမှာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုရှိတယ်
..နော့် ဆြာလေး နော့်….ကျော်တောင်အဲ့လောက်မအ..အဟိဟိ
ဇာတ်လမ်းထဲက မာကတ်တင်းမန်နေဂျာကို တူတိတ်အတဲယားနေပုံပဲ….
အဲဒီမန်နေဂျာက ဈေးကွက်ချဲ့ ဖို့ မားကက်တင်းဆင်းတာနေမှာပါကွယ် ၊
လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ sex ကိစအပေးအယူ ရုပ်ဝတ်ထုကိစတစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ လင် မယားဖြစ်ပြီဆိုကတည်းက ချစ်သူလို အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းလို မိတ်ဆွေလို လည်းဟုတ်တယ်။ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ကျားဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသောသူအပေါ် ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာ သစ်စာဖောက်တာပါပဲ ၊
sex ကိစ္စ တစ်ခုထဲ အတွက်နဲ့ လက်ထပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီယောကျာ်းဟာ ယောကျာ်းကောင်း ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူး…ယောကျာ်းမြတ်တော့ မဟုတ်ဘူး…လူပီသတဲ့လူ မဟုတ်တော့ဘူး…သစ္စာတရား နဲ့ နားလည်မှု ပါအခြေခံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှ